Amatebhe entry level kudivayisi nge ngesivinini ukunyathelisa futhi izinga lempilo elamukelekile - ke HP OfficeJet 4500. Small ukuphrinta isisetshenziswa okuyinto Amakhasi 3000 kuphela ngenyanga, kakhulu kukhawulela kwenkululeko isicelo izixazululo. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi isixazululo neuropathy enjalo kungenziwa ngokuphumelelayo lisetshenziswe kwavulwa ihhovisi elincane, ekhaya, noma njengengxenye yeqembu elincane ukusebenza.
Uhlu izimpahla kuleli cala, umenzi ayifakile ngaphandle MFP, iqoqo inki cartridges, i-CD ne isofthiwe ekhethekile, imibhalo electronic futhi onazo zonke izinguqulo entsha abashayeli, ikhebuli esibonakalayo futhi ikhebula amandla. Uhlu kwemibhalo kufaka imanyuwali yomsebenzisi kanye nemiyalelo ye-HP OfficeJet 4500 manual, nezincwajana isigqebhezana yesiqinisekiso yasekuqaleni.
Njengoba kuphawuliwe ngaphambili, umthombo ukubhala ngenyanga kulokhu kukhawulwe Amakhasi ayizinkulungwane ezintathu eyodwa Emaceleni. Lokhu ivolumu kungenzeka ibe ngokwanele kuphela ekhaya, ihhovisi elincane noma iqoqo ezihlangene. Kuzo zonke ezinye izimo ukusetshenziswa kalungisiswa IFIs kokuthutha ngenxa yezizathu zezomnotho. Esinye agumenti ngokusebenzisa i inhlangano enjalo Kwanyatheliswa kungenzeka ukuthi kunikeza okuphumayo in high imibhalo izinga. Bobabili ikumodi monochromatic kanye nemibala yayo.
Paper, isivinini kanye nokuxhumana
HP OfficeJet MFP 4500 esekelwe ezishisayo inkjet ukuphrinta indlela. izinzuzo zayo zihlanganisa phenomenally okusezingeni eliphezulu ukuphrinta quality futhi izindleko eliphansi likayinki namanye okudlekayo. Kodwa enkulu nyangazonke ukuphrinta ivolumu izixazululo ezinjalo abakwazi ukuqhosha. Nesivinini kungaphasi amadivayisi laser. In the mode monochromatic, ijubane le solution sici-ocebile kuyinto Amakhasi 28 ngomzuzu, futhi inombala - 22. Ubuncane isinqumo Amakhasi ukuba kunyatheliswe kuleli cala 600 x 600. Njengoba umthetho, kule modi isetshenziswa bheke idokhumende monochromatic ukunciphisa inki ukusetshenziswa. isinqumo eliphezulu lingu 4800 x 1200. Lokhu mode arcade esetshenziswa ngokunyathelisa eliphezulu izithombe, izithombe kanye netitfombe.
Ngo isithwebuli mode, sokulungiswa okukhulu kukhawulwe 4800 x 2400 mode, kodwa ngokusebenzisa amasu yengetiwe, lesi silinganiso ngaphandle kwezinkinga ethile kungase kukhule kuze kube 19200 x 19200. I ukujula umbala kulokhu 48 izingcezu, futhi nenani lamakhasi ukuthi siyothatha isikeni kukhawulwe 20 A4 amashidi ngomzuzu. Ukusekela of interface amabili lwenteke kule isixazululo neuropathy. Omunye wabo - USB. Ngosizo iphrinta ixhunyiwe ngqo PC eliseduze futhi kakade wenza umsebenzi idokhumenti iseva. Ngenxa interface yesibili uba-Wi-Fi. Kulokhu, khona kunoma iyiphi ikhompyutha lutholakala, nayo yonke imisebenzi edingekayo eyenziwa yidivayisi neuropathy.
Amabili amamodeli we cartridges kukhona kule kokuqala ukucushwa HP OfficeJet 4500. Omunye wabo, SS653AE, begqoke kuphela ngo-inki omnyama kuphela Ungaphrinta Amakhasi 200. Okwesibili - SS656AE, wagcwalisa ezintathu izinhlobo likayinki esetshenziswa umbala imodi. Ukuphila kwakhe kusuke Amakhasi 350. Futhi kukhona ukuguqulwa ngcono igobolondo omnyama nomhlophe - SS654AE. Kulokhu, emakhasini umthombo linyuke laba ngu-350 amashidi.
HP OfficeJet 4500 isethaphu lapho usebenzisa ikhebuli esibonakalayo icuketse letigaba ezilandelayo:
Sazibekela MFP endaweni lapho izosetshenziswa njalo. Xhuma ikhebula le-PC kanye AC.
Ukuze ufake umshayeli kusukela kudiski. Iqalisa phansi computer.
Thina ukuphrinta ikhasi test.
Ukubuyekeza, intengo kanye umbono abanikazi
Manje HP OfficeJet 4500 angathengwa at intengo ruble 6000. ithegi intengo okunjalo ihlangabezana ngokugcwele Ukucaciswa kushiwo. Ngu pluses zihlanganisa ukuphrinta quality iphrinta nezindleko okuncane ke. Kodwa nebubi kuye okulandelayo: encane ukuphrinta ivolumu, kanye nesivinini iphansana. Lokhu MFP uphelele ukwakha izinhlelo ezincane umculu ukuphathwa. Lokhu kungaba encane ehhovisi noma ekhaya imvelo.
Incephalopathy ye-Head Brain